Kooxda Sevilla Oo Man Uited Ku Garaacday Old Trafford Kana Reebtay Champions League & Roma Oo Iska Xaadirisay Wareega 8 Dhamaadka – Kooxda.com
Home 2018 March Champions League, Ingiriiska, Spain, Wararka Maanta Kooxda Sevilla Oo Man Uited Ku Garaacday Old Trafford Kana Reebtay Champions League & Roma Oo Iska Xaadirisay Wareega 8 Dhamaadka
Kooxda Sevilla Oo Man Uited Ku Garaacday Old Trafford Kana Reebtay Champions League & Roma Oo Iska Xaadirisay Wareega 8 Dhamaadka
Kooxaha Man United iyo Sevilla ayaa Old Trafford ku wada ciyaaray kulan lagu caajisay kana tirsanaa lugtii 2-aad ee wareega 16-ka tartanka champions Leageu.
Kulanka ayaa ahaa mid ay labada kooxoodba ka cabsanayeen in gool laga dhaliyo iyaga oo si weyn daafaca ugu jiray weeraro rogaal celis ahna qaadayay.
Kooxda Sevilla ayaa dhanka kubada maamulaysay iyada oo ka ciyaar qurux badnayd kana weerar badnayd kooxda Man United iyaga oo waliba ka fursado badnaa.
United ayaa u muuqatay mid iyadu ugu tala shagashay mid ciyaarta bar-baro ku dhamaysata ama goolal rogaal celis ah doonaysa in ay dhaliso.
Waxa sidaas ku dhamaaday qaybtii hore ee ciyaarta oo ahayd mid aad loogu caajisay si weyna kubada loogu haystay United Sevilla-na ahayd kooxda kubada quruxda badan.
Qaybtii dambe ee ciyaarta ayaa si la mid ah ku bilaabatay si aad u hoosaysa oo labada kooxood ah laakiin ay wali dhanka kubad haysashada sarayso kooxda Sevilla kana qaab ciyaareed fiican tahay.
United ayaa dhankeeda samaysay fursad yar laakiin waxa ay ku fashilantay in ay ka faa,iidaysato oo ay wax gool ah u badasho.
Kooxda Sevilla ayaa ka midho dhalisay gacan sarayntii ay ka gacan saraysay Man United waxana ay goolkii 1-aad dhalisay daqiiqadii 74-aad waxana goolka u dhaliyay xiddiga Wissam Ben Yedder oo badal ku soo galay qaybtii dambe ee ciyaarta.
Jose Mourinho ayaa isla markiiba talaabo qaaday oo is raaciyay laba badal isaga oo ciyaarta ka saaray Jesse Lingard iyo Antonio Valencia kuna soo balay Anthony Martial iyo Juan Mata si uu ciyaarta wax uga badalo.
Laakiin Sevilla ayaa daqiiqadii 78-aad dhalisay goolka 2-aad iyaga oo u dhaliyay xiddiga Wissam Ben Yedder kaas oo ciyaarta ka dhigay 2/0.
United ayaa boordka iska jaftay oo daqiiqadii 83-aad dhalisay goolka 1-aad iyaga oo uu u dhaliyay xiddiga Romelu Lukaku kaas oo ciyaarta dib u soo nooleeyay ciyaartana ka dhigay 2/1.
Waxa sidaas ku dhamaatay ciyaarta oo ay Sevilla guul 2/1 ah ku gaartay Sidaasna Man United uga reebtay Tartanka xilli ciyaareedkan.
Kooxda Roma ayaa dhanka kale guul 1/0 ah ka gaartay Kooxda Shakhtar taas oo la macno ah in ay labada lugoood goolashoodu noqdeen 2/2 sidaasna ay Roma ugu reebtay Shakhtar goolkii ay garoonkeeda kaga soo dhalisay
Filed in: Champions League, Ingiriiska, Spain, Wararka Maanta